सिम्बल्टा बनाम प्रोजाक: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि उत्तम छ - औषधि बनाम मित्र | सेप्टेम्बर 2021
कम्पनी, चेकआउट भारी खेल समाचार, कल्याण औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा औषधि जानकारी औषधि बनाम मित्र कम्पनी कम्पनी, समाचार समुदाय चेकआउट समुदाय, कम्पनी कम्पनी, औषधि जानकारी स्वास्थ्य शिक्षा, घरपालुवा जनावर औषधि जानकारी, समाचार स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार
मुख्य >> औषधि बनाम मित्र >> सिम्बल्टा बनाम प्रोजाक: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि उत्तम छ
सिम्बल्टा बनाम प्रोजाक: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि उत्तम छ
यदि तपाईं वा प्रियजनले डिप्रेसन अनुभव गर्नुभयो भने, चिन्ता , वा मानसिक अवस्थालाई असर गर्ने अन्य सर्तहरू, तपाईं एक्लो हुनुहुन्न। १ 16 करोड भन्दा बढी अमेरिकी वयस्क प्रमुख डिप्रेशन डिसअर्डर (MDD, वा उदासी पनि भनिन्छ), र करीव million लाख वयस्कहरूले चिन्ता डिसअर्डर (GAD) लाई सामान्यीकृत गरेका छन्।
सिम्बाल्टा (ड्युलोक्सेटीन) र प्रोजाक (फ्लुओक्सेटीन) दुई लोकप्रिय एन्टीडिप्रेसस औषधी हो जुन डिप्रेसन र अन्य धेरै शर्तहरूको लागि सिफारिस गरिएको छ। दुबै प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स संयुक्त राज्य खाद्य र औषधि प्रशासन (एफडीए) द्वारा अनुमोदित छ। साइम्बाल्टा वा प्रोजाकको साथ औषधी प्रयोग अक्सर साइकोलोपीसँग मनोवैज्ञानिक वा साइकोट्रीको डाक्टरको साथ जोडीन्छ।
सिम्बाल्टालाई एसएनआरआई भनिने औषधीहरूको समूहमा वर्गीकृत गरिएको छ (सेरोटोनिन-नोरपाइनफ्रिन पुनःअपटेक अवरोधकर्ता)। तिनीहरू दिमागमा सेरोटोनिन र नोरपिनफ्रिनको स्तर बढाउँदै काम गर्छन्।
प्रोजाक ड्रग्सको समूहको एक हिस्सा हो जसलाई एसएसआरआईहरू भनिन्छ (चुनिंदा सेरोटोनिन रिउपटेक इन्हिबिटरहरू)। SSRIs मस्तिष्कमा सेरोटोनिनको स्तर बढाउँदै काम गर्दछ।
सिम्बाल्टा र प्रोजाक बीचको मुख्य भिन्नताहरू के के हुन्?
सिम्बल्टा (ड्युलोक्सेटीन) एक SNRI औषधि हो। यो दुबै ब्राण्ड र जेनेरिकमा उपलब्ध छ। सिम्बल्टा केवल क्याप्सूल फारममा उपलब्ध छ। खुराक फरक-फरक हुन्छ, तर सामान्य खुराक प्रति दिन mg० मिलीग्राम हो। Cymbalta वयस्क मा प्रयोग गरीन्छ तर केहि उमेरमा केही सर्तहरूको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ (चार्ट हेर्नुहोस्)।
प्रोजाक (फ्लोक्सेटिन) एक एसएसआरआई औषधि हो। यो दुबै ब्राण्ड र जेनेरिकमा उपलब्ध छ। प्रोजाक ट्याब्लेट फारम, क्याप्सूल फारम, र मौखिक समाधानको रूपमा उपलब्ध छ। यद्यपि खुराक फरक हुन्छ, एक दैनिक खुराक दिनको एक पटक २० मिग्रा हुन्छ। Prozac वयस्कहरूमा तल चार्टमा सूचीबद्ध सबै संकेतहरूको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। प्रोजाक depression बर्ष भन्दा बढी उमेरका बच्चाहरू डिप्रेसनका लागि वा CD बर्ष भन्दा बढी उमेर ओसीडीको लागि पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
Cymbalta र Prozac बीच मुख्य भिन्नता
औषधि वर्ग सेरोटोनिन-नोरपाइनफ्रिन पुनःअपटेक अवरोधकर्ता (SNRI) चयनित सेरोटोनिन पुनःअपटेक अवरोधकर्ता (एसएसआरआई)
ब्रान्ड / जेनेरिक स्थिति ब्रान्ड र जेनेरिक ब्रान्ड र जेनेरिक
जेनेरिक नाम के हो? Duloxetine फ्लुओक्सेटीन
कुन फार्म (हरू) ड्रग भित्र आउँछ? क्याप्सुलहरू ट्याबलेट, क्याप्सूल, मौखिक समाधान; Symbyax को रूपमा olanzapine संग संयोजनमा पनि उपलब्ध छ
मानक खुराक के हो? उदाहरण: mg० मिलीग्राम एक पटक दैनिक (खुराक फरक हुन्छ) उदाहरण: २० मिलीग्राम एक पटक दैनिक (खुराक फरक हुन्छ)
विशिष्ट उपचार कति लामो हुन्छ? फरक हुन्छ फरक हुन्छ
कसले औषधी प्रयोग गर्दछ? वयस्कहरू र बच्चाहरू र किशोरकिशोरीहरू7वर्ष वा सो भन्दा ठूलो सामान्य चिन्ता विकारको लागि वा १ 13 बर्ष वा सोभन्दा बढी फाइब्रोमाइल्जियाको लागि वयस्क र बच्चाहरू र डिप्रेसनका लागि किशोरहरू (years बर्ष भन्दा बढी उमेर) वा OCD (old बर्ष भन्दा माथिका)
परिस्थितिहरू सिम्बल्टा र प्रोजाक द्वारा उपचार गरिएको
Cymbalta प्रमुख डिप्रेशनल डिसअर्डर, मधुमेह परिधीय न्यूरोपैथिक दुखाइ, र वयस्कहरुमा पुरानो मस्कुलोस्केलेटल दुखाईका लागि संकेत गरीएको छ। यो वयस्कहरूमा anxiety बर्ष र सो भन्दा बढि उमेरका बच्चाहरू र १ adults बर्ष वा सो भन्दा बढि उमेरका र फाइब्रोमाइल्जियाको लागि पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। डिम्ब्रेसन, मधुमेह परिधीय न्यूरोपैथिक दुखाइ, वा पुरानो मस्कुलोस्केलेटल दुखाइका लागि बच्चाहरूमा प्रयोग गर्नका लागि सिम्बाल्टा स्वीकृत गरिएको छैन।
प्रोजाक प्रमुख डिप्रेसन र जुनसुकै बाध्यकारी विकार (OCD) बच्चाहरू, किशोर र वयस्कहरूमा संकेत गर्दछ। प्रोजाकले बुलीमिया नर्भोसा, प्रसूतपूर्व डिस्फोरिक डिसअर्डर, र पैनिक डिसअर्डरको पनि उपचार गर्न सक्छ। Prozac7बर्ष भन्दा कम उमेरका बच्चाहरूको लागि प्रयोगको लागि अनुमोदित छैन।
नोट: Symbyax एक संयोजन औषधि हो जसमा फ्लुएक्सेटीन, प्रोजेकको घटक, olanzapine नामक अर्को औषधीको साथ हुन्छ। Symbyax द्विध्रुवी I अव्यवस्था वा उपचार प्रतिरोधी अवसाद संग सम्बन्धित अवसादग्रस्त एपिसोडहरूको उपचार गर्न सक्दछ।
कहिलेकाँही डाक्टरहरूले यो औषधि तोक्छन् अफ-लेबल अन्य प्रयोगहरूको लागि ती दर्साईएको भन्दा बाहेक।
सर्त सिम्बल्टा प्रोजाक
सामान्यीकृत चिन्ता विकार हो अफ-लेबल
मधुमेह परिधीय न्यूरोपैथिक दुखाई हो अफ-लेबल
फाइब्रोमायाल्जिया हो अफ-लेबल
दीर्घकालीन मस्कुलोस्केलेटल दुखाई हो अफ-लेबल
जुनूनी-बाध्यकारी डिसऑर्डर (OCD) अफ-लेबल हो
बुलीमिया नर्भोसा हैन हो
आतंक विकार अफ-लेबल हो
मासिकपूर्व डिस्फोरिक डिसअर्डर अफ-लेबल हो
द्विध्रुवी विकारसँग सम्बन्धित अवसादग्रस्त एपिसोडहरू उपचार गर्न वा उपचार प्रतिरोधी डिप्रेसनको लागि ओलान्जापाइन (Symbyax को रूपमा) संग संयोजनमा। हैन हो
चिन्ता विकार को व्यवस्थापन हो हो
के Cymbalta वा Prozac अधिक प्रभावी छ?
एउटा अध्ययन सिम्बल्टा, प्रोजाक, र अर्को औषधी ईफेक्सोरलाई प्लेसबोमा तुलना गर्ने धेरै अध्ययनहरूको समीक्षा गरियो। साइम्बल्टा र प्रोजाक डिप्रेसनका बिरामीहरूको लागि प्रभावकारिता र सुरक्षामा समान पाइएको थियो।
कुन औषधी बढी उपयुक्त हुन्छ भनेर निर्णय गर्न निदान आवश्यक कारक हो। उदाहरण को लागी, यदि संकेत उदासीनता हो, या त Prozac वा Cymbalta उपयुक्त विकल्प हुन सक्छ। जे होस्, यदि निदान OCD हो भने, प्रोजाक बढी उपयुक्त हुन्छ किनकि यो OCD को उपचारको लागि संकेत गरिएको छ जबकि सिम्बल्टा छैन। र यदि निदान फाइब्रोमाइल्जिया हो भने, साइम्बल्टा बढी उपयुक्त हुन्छ किनकि यो फाइब्रोमाइल्जियाको लागि संकेत गरिएको छ, जबकि प्रोजाक छैन।
तपाईको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले निर्धारण गर्न सक्दछ कि कुन औषधि तपाईको लागि उचित छ तपाईको निदान, मेडिकल ईतिहास र अन्य चिकित्सा सर्तहरूको साथसाथ, तपाईले लिनुहुने कुनै पनि औषधीहरू जुन सिम्बाल्टा वा प्रोजाकसँग अन्तर्क्रिया गर्दछ।
कभरेज र साइम्बल्टा बनाम प्रोजाकको लागत तुलना
धेरै जसो बीमा र मेडिकेयर पार्ट डी प्रिस्क्रिप्शन योजनाहरूले सिम्बाल्टा वा प्रोजाकलाई समेट्छन् - जेनेरिक फार्म छनौटले महत्वपूर्ण लागत बचतमा परिणाम दिन्छ। ब्रान्ड-नाम उत्पादनहरूसँग धेरै नै प्रतिलिपि हुन्छ वा सबैमा कभर हुन सक्दैन।
Cymbalta को आउट-को-पकेट लागत 60०, mg० मिलीग्राम जेनेरिक क्याप्सूलको लागि लगभग6१२6 हो। नि: शुल्क सिंगलकेयर कार्डले तपाईंलाई जेनेरिक सिम्बाल्टामा पैसा बचत गर्न मद्दत गर्दछ, मूल्यलाई १$ डलरसम्म कममा ल्याउँदा।
Prozac को लागी आउट-अफ-पकेट लागत # ,०, २० मिलीग्राम जेनेरिक क्याप्सूलको लागि २१ डलर हो। तपाईं एकलकेयर कार्डको साथ जेनेरिक प्रोजाकमा पैसा बचत गर्न सक्नुहुनेछ, जसले जेनेरिक मूल्यलाई लगभग $ down मा ल्याउन सक्छ।
Cymbalta वा Prozac मा अप-टु-डेट कभरेज जानकारीको लागि तपाईंको बीमा योजनालाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
सामान्यतया बीमा द्वारा कभर? हो (सामान्य) हो (सामान्य)
सामान्यतया चिकित्सा भाग डी द्वारा कभर? हो (सामान्य) हो (सामान्य)
मात्रा ,०, mg० मिलीग्राम क्याप्सूल ,०, २० मिलीग्राम क्याप्सूल
विशिष्ट मेडिकेयर कोपे $ ०- $ २० $ ०- $ २०
एकलकेयर लागत $ १ + $ - $ २०
साइम्बल्टा बनाम प्रोजाकको साझा साइड इफेक्टहरू
सिम्बाल्टाको सबैभन्दा सामान्य दुष्प्रभावहरू मतली, टाउको दुख्ने, निद्रा लाग्ने, भूख न लाग्ने, कब्ज, सुख्खा मुख, र चक्कर आउनेहरू हुन्।
प्रोजाकको सबैभन्दा सामान्य साइड इफेक्टहरू भनेको टाउको दुखाइ, मतली, उनी निद्रा, अनिद्रा, भूक नहुने, यौन साइड इफेक्ट, र घबराहट वा चिन्ता हो।
वयस्कों को लागी सामान्य रक्त शर्करा स्तर के हो?
जब तपाइँ तपाइँको सिम्बाल्टा वा प्रोजाक प्रिस्क्रिप्शन भर्नुहुन्छ वा भर्नुहुन्छ, तपाइँले एक औषधी गाईड प्राप्त गर्नुहुनेछ जसले साइड इफेक्ट, चेतावनी, र तपाइँको औषधिको बारेमा अन्य महत्वपूर्ण जानकारी छलफल गर्दछ।
यो प्रतिकूल प्रभावको पूर्ण सूची होईन। अन्य, गम्भीर दुष्प्रभाव हुन सक्छ। साइड इफेक्टहरूको पूर्ण सूचीको लागि तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग परामर्श लिनुहोस्।
टाउको दुख्ने हो १%% हो एक्काइस%
मतली हो २. 3% हो एक्काइस%
निन्द्रा / निन्द्रा हो %% हो १%%
पखाला हो %% हो १२%
कब्ज हो %% हो %%
सुख्खा मुख हो १%% हो १०%
स्खलन विकार / यौन रोग हो २--4% हो % रिपोर्ट गरिएको छैन
चक्कर हो %% हो %%
भोक कम गर्नु हो %% हो एघार%
नर्वस / चिन्ता हो %% हो १%%
स्रोत: डेलीमेड ( सिम्बल्टा ), डेलीमेड ( प्रोजाक )
साइम्बाल्टा बनाम प्रोजेकको ड्रग अन्तर्क्रिया
MAO इनहिबिटर (MAOI, वा monoamine oxidase अवरोधक) औषधीहरू Cymbalta वा Prozac लिँदा, वा Cymbalta वा Prozac लिनु भन्दा पहिले वा पछि समयावधिको लागि प्रयोग गरिनु हुँदैन। संयोजनले जोखिम बढाउन सक्छ सेरोटोनिन सिन्ड्रोम , अधिक सेरोटोनिनको कारणले जीवनलाई जोखिममा पार्ने चिकित्सा आपतकालिन। ट्राइप्टनहरू, जो माइग्रेन औषधोपचार हो, जस्तै इमिट्रेक्स (सुमात्रीप्टन), र अन्य एन्टिडिप्रेसन्ट्स, सेरोटोनिन सिन्ड्रोमको जोखिमको कारण साइम्बाल्टा वा प्रोजाकसँग मिसाउँन प्रयोग गर्नु हुँदैन। रबिटुसीन-डीएममा फेला परेका र धेरै खोक्रा र चिसो उत्पादनहरू खोकीलाई दबाउने डेक्सट्रोमर्थोननलाई वेवास्ता गर्नुपर्दछ किनकि यसले सिम्बाल्टा वा प्रोजाकसँग मिसाउँदा सेरोटोनिन सिन्ड्रोम पनि निम्त्याउन सक्छ।
Cymbalta वा Prozac लिनुहुँदा रक्सीबाट टाढा रहनुहोस्।
यो औषधी अन्तरक्रियाको पूर्ण सूची होइन। औषधि अन्तर्क्रियाको पूर्ण सूचीको लागि तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग परामर्श लिनुहोस्। प्रिस्क्रिप्शन, ओभर-द-काउन्टर (ओटीसी), र भिटामिन सहित सबै औषधीहरूको बारेमा तपाइँको डाक्टरलाई भन्नुहोस्।
औषधि औषधि वर्ग सिम्बल्टा प्रोजाक
Tranylcypromine MAOIs हो हो
रक्सी रक्सी हो हो
Zolmitriptan Triptans हो हो
सेन्ट जोन्स Wort पूरक हो हो
वारफेरिन एन्टिकोआगुलेन्ट हो हो
ट्रामाडोल ओपिओइड दुखाइ कम गर्दछ हो हो
डेक्सट्रोमर्थोर्फन (धेरै खोकी र चिसो उत्पादनहरूमा) खोकी दमन हो हो
एरिथ्रोमाइसिन म्याकोराइड एन्टिबायोटिक हैन हो
नेप्रोक्सेन NSAIDs हो हो
सर्टलाइन SSRI antidepressants हो हो
भेन्लाफैक्सिन SNRI antidepressants हो हो
मेटाक्सलोन मांसपेशी आराम हो हो
Divalproex सोडियम / valproic एसिड
टोपिरामेट एन्टिकोनभल्सेन्ट्स हो हो
Vinblastine ड्रग्स एन्जाइम CYP2D6 द्वारा मेटाबोलिज हो हो
लोराजेपाम बेन्जोडियाजेपाइन हो हो
Cymbalta र Prozac को चेतावनी
एन्टीडिप्रेसन्ट्स, सिम्बल्टा र प्रोजाक सहित, सँग एक छ कालो बक्स चेतावनी आत्महत्या को। एक कालो बक्स चेतावनी एफडीए द्वारा आवश्यक कडा चेतावनी हो। बच्चाहरू, किशोर-किशोरीहरू, र युवा वयस्कहरू (२ 24 बर्ष उमेर सम्म) एन्टिडीप्रेसन्टहरू लिने आत्महत्या गर्ने विचार र व्यवहारको बढ्दो जोखिममा छन्। जो कोही एन्टीडिप्रेसन्ट लिन्छन् सावधानीपूर्वक अनुगमन गरिनु पर्छ।
सेरोटोनिन सिन्ड्रोम ज्यादै खतरापूर्ण आपतकालिन हो जुन धेरै सेरोटोनिनको कारणले हुन्छ। सिम्बाल्टा वा प्रोजाक लिने बिरामीहरुलाई सेरोटोनिन सिन्ड्रोम संकेत र लक्षणहरुका लागि अनुगमन गरिनु पर्छ जस्तै मतिभ्रमण, दौरा, हृदय ताल वा रक्तचाप परिवर्तन (जस्तै उच्च रक्तचाप), र आन्दोलन। यदि यी लक्षणहरू देखा पर्दछ भने आपतकालीन चिकित्सा उपचार खोज्नुहोस्। सेरोटोनिनको स्तर बढाउने अन्य औषधिहरू लिने (ट्राइप्टन, ट्राइसाइक्लिक एन्टिडेप्रेससन्ट, फेंटानेल, लिथियम, ट्रामाडोल, ट्रिपटोफन, बसपिरोन, डेक्सट्रोमर्थन, एम्फीटामिन, सेन्ट जोन्स वर्ट, र एमएओआई) सेरोटोनिन सिन्ड्रोमको जोखिम बढाउँछ।
जब सिम्बाल्टा वा प्रोजाक बन्द गर्दै, फिर्ती लक्षणहरू जस्तै आन्दोलन देखा पर्न सक्छ। तपाईको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले तपाईलाई सिम्बाल्टा वा प्रोजाक बन्द गर्न उत्तम तरिकामा सल्लाह दिन सक्दछ, ढिलो टेपर तालिकाको साथ। सिम्बल्टा वा प्रोजाक अचानक नरोक्नुहोस्।
जो बिरामी परेका छन् वा जसलाई द्विध्रुवीय गडबडी छ सावधानीका साथ प्रयोग गर्नुहोस्।
Hyponatremia (कम सोडियम) को कारण अनुचित antidiuretic हार्मोन स्राव (SIADH) को सिंड्रोम को कारण हुन सक्छ र गम्भीर हुन सक्छ। लक्षणहरूमा टाउको दुख्ने, ध्यान केन्द्रित गर्न कठिनाई, मेमोरी कमजोरी, कन्फ्युजन, कमजोरी, र अस्थिरता समावेश हुन सक्छ, जुन झर्ने हुन सक्छ। आपतकालीन उपचार खोज्नुहोस् र लक्षणहरू देखा पर्यो भने सिम्बाल्टा वा प्रोजाक रोक्नुहोस्।
उपचार नगरिएका शारीरिक कोणहरू (कोण बन्द हुने जलबिन्दु) को साथ बिरामीहरुमा एसएसआरआई लाई वेवास्ता गर्नुहोस्।
एसएसआरआईले रक्तस्राव जोखिम बढाउन सक्छ - एस्प्रिन, एनएसएआईडी, वा वारफेरिनको प्रयोगसँगै यो जोखिम बढ्छ।
ड्राइभ वा मेसिनरी अपरेट नगर्नुहोस् जबसम्म तपाइँलाई थाहा हुँदैन कि सिम्बाल्टा वा प्रोजाकले तपाईंलाई कसरी असर गर्छ।
किडनी समस्या भएका बिरामीहरूमा सावधानीका साथ प्रयोग गर्नुहोस्।
साइम्बल्टा वा प्रोजाकले मधुमेह भएका बिरामीहरूमा रगतमा चिनीको मात्रा बदल्न सक्छ। यसको लागि अनुगमन आवश्यक पर्दछ र डायबेटिस औषधिहरूको लागि डोज समायोजनको आवश्यक पर्दछ।
सिम्बल्टा वा प्रोजाकले वजन परिवर्तन गर्न सक्दछ। सिम्बल्टाले तौल बढाउन वा घाटा निम्त्याउन सक्छ, जबकि प्रोजाकले वजन घटाउन सक्छ। सिम्बल्टा वा प्रोजाकको साथ उपचारको क्रममा वजन निरीक्षण गर्नुहोस्।
सिम्बाल्टा वा प्रोजाक गर्भावस्थामा मात्र प्रयोग गर्न सकिन्छ यदि आमालाई फाइदा बच्चामा हुने जोखिम भन्दा बढी छ। औषधी रोक्दा डिप्रेसन वा चिन्ताको फड्को हुन सक्छ। यद्यपि, तेस्रो त्रैमासिकमा एसएनआरआई (जस्तै सिम्बाल्टा) वा एसएसआरआई (जस्तै प्रोजाक) समक्ष नवजात शिशुहरूले लामो समयसम्म अस्पताल भर्ना, श्वासप्रश्वास समर्थन, र ट्यूब फीडिंग जटिलताको विकास गरेका छन्। यदि तपाईं पहिले नै Cymbalta वा Prozac लिनुभयो र तपाईं गर्भवती फेला पार्नुभयो भने, निर्देशनको लागि तुरून्त तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
Cymbalta र Prozac मा छन् बियरको सूची (ड्रगहरू जुन उमेर वयस्कहरूमा अनुपयुक्त हुन सक्छ)। तपाईंको स्वास्थ्यसेवा प्रदायकसँग परामर्श गर्नुहोस् कि यदि Cymbalta वा Prozac तपाईंको लागि सुरक्षित छ भने।
अन्य Cymbalta चेतावनी:
सिम्बल्टा क्याप्सूल पूरै निल्नु पर्छ र खानेकुरा बिना वा लिन सकिन्छ। क्याप्सुल च्यु, क्रश, वा खोल्न नगर्नुहोस्।
सिम्बल्टा लिने व्यक्तिहरूमा कलेजो समस्या भएको छ - यी घातक हुन सक्छ। तुरुन्त आफ्नो डाक्टरसँग परामर्श गर्नुहोस् र Cymbalta लिन रोक्नुहोस् यदि तपाईं पीलिया वा कलेजो समस्याको लक्षण देखा पर्यो भने। व्यक्ति जो कलेजो समस्या छन् र / वा पर्याप्त मात्रामा रक्सी पिउँछ Cymbalta लिनुहुन्न।
सिम्बाल्टाले ओर्थोस्टेटिक हाइपोटेशन (रक्तचापमा खसाउँदा तपाईं खडा हुँदा), ​​झर्छ र / वा बेहोस हुन्छ। झरनाले फ्रैक्चर वा अस्पताल भर्ना हुन सक्छ।
गम्भीर छाला प्रतिक्रिया हुन सक्छ। तिनीहरू एरिथेमा मल्टिफॉर्म वा स्टीभेन्स-जॉनसन सिन्ड्रोम भनिने अवस्थाका कारण हुन सक्छन्। Cymbalta लिन रोक्नुहोस् र तुरून्त निर्देशनको लागि डाक्टरलाई सूचित गर्नुहोस् यदि तपाईं छाला, छीलो दाग, वा छालाको घाव विकसित गर्नुहुन्छ भने। यदि लक्षणहरू गम्भीर छन् भने, आपतकालीन चिकित्सा उपचार खोज्नुहोस्।
सिम्बल्टाले मूत्र समस्या निम्त्याउन सक्छ। यदि तपाईंलाई पेशाब गर्न समस्या भएको छ भने आफ्नो डाक्टरलाई सूचित गर्नुहोस्।
Cymbalta लिँदा रक्तचाप मोनिटर गर्नुहोस्।
Cymbalta नलिनुहोस् यदि तपाईलाई जीर्ण रोगको रोग वा सिरोसिस छ।
यदि तपाईलाई गम्भीर गुर्दा रोग छ भने सिम्बाल्टा नलिनुहोस्।
अन्य प्रोजाक चेतावनी:
विरलै अवस्थाहरूमा, त्यहाँ पुराना र एलर्जी प्रतिक्रिया / प्रणालीगत एनाफिलेक्सिस प्रतिक्रियाहरू छन्, जुन घातक थिए। यदि तपाईं दाग वा एलर्जीको लक्षण अनुभव गर्नुहुन्छ भने, प्रोजाक लिन रोक्नुहोस्, र तत्काल चिकित्सा उपचार खोज्नुहोस्।
प्रोजाकले क्यूटी बढावा र भेंट्रिकुलर एरिथमिया निम्त्याउन सक्छ, जुन जीवनलाई जोखिमपूर्ण हुन सक्छ। केहि बिरामीहरूलाई चिकित्सा अवस्था वा अन्य औषधीको कारण उच्च जोखिम हुन्छ। तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकलाई सोध्नुहोस् यदि प्रोजाक तपाईंको लागि सुरक्षित छ।
सिम्बल्टा बनाम प्रोजाकको बारेमा प्राय: सोधिने प्रश्नहरू
Cymbalta के हो?
सिम्बाल्टा, जसलाई यसको जेनेरिक नाम डुलोक्सेटीन द्वारा पनि चिनिन्छ, एक एसएनआरआई हो, वा सेरोटोनिन-नोरिपाइनफ्रिन पुनःअपटेक अवरोधक हो। सिम्बाल्टा, जुन दुबै ब्राण्ड र जेनेरिक फार्ममा उपलब्ध छ, डिप्रेसन, चिन्ता, फाइब्रोमाइल्जिया, मधुमेह परिधीय न्यूरोपैथीको दुखाई, र पुरानो मस्कुलोस्केलेटल दर्द।
प्रोजाक भनेको के हो?
प्रोजाक, यसको जेनेरिक नाम, फ्लुओक्सेटाइनबाट पनि परिचित छ, एक एसएसआरआई वा छनौट गरिएको सेरोटोनिन रिअपटेक अवरोधकर्ता हो। प्रोजाकले डिप्रेसन, ओब्जेसिभ-कम्पल्सिव डिसअर्डर, बुलिमिया नर्भोसा, प्रीमेन्स्ट्रियल डिस्फोरिक डिसअर्डर, र पैनिक डिसअर्डरको व्यवहार गर्दछ। प्रोजाक दुबै ब्रान्ड र जेनेरिक फार्ममा उपलब्ध छ।
के Cymbalta र Prozac उस्तै हो?
सिम्बल्टा र प्रोजाक समान छन्, तर समान छैन। सिम्बाल्टा एक SNRI वा सेरोटोनिन-नोरपाइनफ्रिन रिअपटेक अवरोधक हो। केहि अन्य SNRIs ईफेक्सोर (भेन्लाफैक्साइन) र प्रिस्टीक (डेसेन्लाफाक्सिन) सामेल छन्।
प्रोजाक एक एसएसआरआई हो। तपाईंले सुन्नु भएको अन्य एसएसआरआई ड्रग्सहरूमा सेलेक्सा (साइटोलोप्राम), लेक्साप्रो (एस्सीटलोप्राम), लुभोक्स (फ्लोभोक्सामिन), पक्सिल (प्यारोक्सेटीन), र जोलोफ्ट (सेर्टरलाइन) समावेश छन्।
के Cymbalta वा Prozac राम्रो छ?
अध्ययनहरूले देखाउँदछ कि सिम्बाल्टा र प्रोजाक सुरक्षा र प्रभावकारिताको मामलामा समान छन्।
तपाईको लागि उत्तम औषधी तपाईको स्वास्थ्य सेवा प्रदायक द्वारा मात्र निर्धारण गर्न सकिन्छ जसले तपाईको निदान, लक्षण, चिकित्सा अवस्था, र ईतिहासका साथै तपाईले लिनुहुने कुनै पनि अन्य औषधीहरू जुन सम्भाव्य रूपमा सिम्बाटा वा प्रोजाकसँग अन्तर्क्रिया गर्न सक्दछ।
के म गर्भवती हुँदा सिम्बल्टा वा प्रोजाक प्रयोग गर्न सक्छु?
सिम्बल्टा वा प्रोजाक लगायत निश्चित एन्टिडिप्रेसन्टसको सम्पर्कमा नवजात शिशुहरूले गर्भावस्थाको तेस्रो त्रैमासिकमा गम्भीर जटिलताहरू विकास गरेका छन्। यी जटिलताहरूमा लामो अस्पताल भर्ती, ट्यूब खुवाउने, र सास फेर्न समर्थन समावेश छ।
यदि तपाईं पहिले नै Cymbalta वा Prozac लिइरहनु भएको छ र तपाईं गर्भवती हुनुहुन्छ भनेर फेला पार्नुभयो भने, तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग परामर्श लिनुहोस्। यदी तिमी स्तन पान , आफ्नो OB-GYN साथ पनि परामर्श गर्नुहोस्।
के म Cymbalta वा Prozac रक्सीको साथ प्रयोग गर्न सक्छु?
सं। Cymbalta वा Prozac रक्सीको साथ जोड्नु हुँदैन। संयोजनले श्वासप्रश्वासको उदासीनताको जोखिम बढाउँदछ - सास फेर्न ढिलो हुन्छ, पर्याप्त अक्सिजन पाउँदैन sed र बेहोरापन र निन्द्रा र कमजोर सतर्कता बढाउन सक्छ।
Prozac भन्दा कुन antidepressant राम्रो छ?
सबै एन्टीडिप्रेसन्टहरू सुरक्षा र प्रभावकारिता दुवै देखाउन विस्तृत परीक्षणको माध्यमबाट आएका छन्। जबकि प्रोजाक धेरै प्रभावकारी हुन सक्छ, यसले सबैका लागि काम गर्दैन, किनभने व्यक्ति बिभिन्न औषधिमा फरक फरक देखिन्छ। यदि तपाइँ प्रोजाक लिइरहनु भएको छ र छ देखि eight हप्ता सम्म लिइसके पछि यसले काम गरेको महसुस गर्दैन भने, चिकित्सा सल्लाहको लागि तपाइँको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग परामर्श लिनुहोस्।
कसरी सिम्बाल्टा अन्य एन्टिप्रेप्रेसन्टहरू भन्दा फरक छ?
सिम्बाल्टा जस्ता एसएनआरआई औषधिहरूले दिमागमा सेरोटोनिन र नोरपिनफ्रीन दुबैमा काम गर्दछ, जबकि एसएसआरआई औषधिहरू सेरोटोनिनमा काम गर्दछन्। साइम्बल्टालाई डिप्रेसन र चिन्ताका साथै केहि प्रकारको पीडा, जस्तै फाइब्रोमाइल्जिया, मस्कुलोस्केलेटल दुखाइ, र मधुमेह न्यूरोपैथिक पीडाको उपचार गर्न पनि संकेत गरिएको छ।
Cymbalta कसले लिनु हुँदैन?
मानिसहरू जो मोनोआमाइन अक्सिडेज इनहिबिटर (MAOI) ड्रग्सको कक्षामा एन्टीडिप्रेससन्ट लिन्छन् उनीहरूले सिम्बाल्टा लिनुहुन्न। अन्य औषधीहरूले सिम्बाल्टासँग अन्तरक्रिया गर्दछन् (माथिको चार्ट हेर्नुहोस्)। सेरोटोनिन सिन्ड्रोमको बारेमा तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकलाई सोध्नुहोस्, र यदि तपाईंले लिनुहुने औषधिहरू सिम्बाल्टासँग संयोजनमा सुरक्षित छन् भने।
साथै, डिम्ब्रेसन, मधुमेह परिधीय न्यूरोपैथिक दुखाइ, वा पुरानो मस्कुलोस्केलेटल दुखाइका लागि बच्चाहरूमा साइम्बल्टा प्रयोग गर्नु हुँदैन।
साइम्बल्टा बनाम जोलोफ्ट
सिम्बाल्टा बनाम लेक्साप्रो
सेलेक्सा बनाम प्रोजाक
लेक्साप्रो बनाम प्रोजाक
फार्मेसी मूल्यहरू कति फरक हुन्छन्?
यो हाइपोथायरायडिजमको साथ बाँच्न के हो
nabumetone 500 मिलीग्राम तपाइँ उच्च प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ
Afrin नाक स्प्रे को लागी प्रयोग गरीन्छ
के आवश्यक तेल न nail कवक को लागी राम्रो छ
कसरी एन्टिबायोटिक मा खमीर संक्रमण रोक्न
फारेनहाइट मा मानव शरीर को तापमान के हो?